Baro Maalmaha Rolli Xiisaha Leh ee Dhaqanka Genoa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Baro Maalmaha Rolli Xiisaha Leh ee Dhaqanka Genoa
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
by Mario Masciullo - eTN Talyaaniga
5 min akhris
Maalmaha Rolli ee Dhaqanka Genoa
Written by Mario Masciullo - eTN Talyaaniga
Soo -booqdeyaashu waxay yeelan doonaan toddoba maalmood oo cajiib ah si ay u ogaadaan farshaxanka Talyaaniga ee Renaissance -ka weyn iyo daaraha Baroque ee Magaalada Genova ee Talyaaniga.
U safrida Genoa qarniyadii dahabiga ahaa, ee u dhexeeyay farshaxanka, frescoes, iyo jardiinooyinka, waa furitaanka aan caadiga ahayn ee dhismayaasha Dhaxalka Adduunka ee UNESCO.
Dhacdadu waxay dhacdaa Oktoobar 4 illaa 8, 2021, inta lagu guda jiro Toddobaadka Maraakiibta ee Rolli, iyo Oktoobar 9 illaa 10 oo leh Rolli Days.
Markii ugu horraysay, dayrtaan, Maalmaha Rolli - dhacdada fura albaabbada Palazzi dei Rolli, dhaxalka UNESCO - waxay socon doontaa muddo toddobaad ah.
Qasnadaha dhismaha ee magaaladu waxay hoy u tahay farshaxanno mideeya farshaxanka Talyaaniga-Canova, Antonello da Messina, frescoes qarnigii 17aad, violin-yadii Paganini, iyo farshaxanka Yurub, gaar ahaan farshaxanka Flemish.
Toddobaadkan waa fursad lagu ogaanayo taariikhda magaalada, oo ah mid ka mid ah dekedaha ugu waaweyn badda Mediterranean, oo aan ka fogayn Alps iyo faragooysta. Soo-booqdeyaashu waxay la kulmaan Genoa aan hore loo arag, oo ay ka buuxaan daar aad u qurux badan oo qarniyo badan si hinaase leh u ilaalinaysay khasnaddooda: barxadaha, jardiinooyinka, wareegyada frescoes-ka, farshaxannada laga soo bilaabo dabayaaqadii Renaissance, iyo Baroque.
Booqashooyinka waxaa lagu sameeyaa nabadgelyo dhammaystiran iyo u hoggaansanaanta qawaaniinta COVID - waa bilaash, laakiin waajibaadka meelaynta, iyo furitaanka daaradaha waxaa weheliya jadwalka hodanka ah ee dhacdooyinka dammaanadda.
Booqashooyinka daaraha waaweyn iyo taallooyinka waxay bilaabmaan inta lagu guda jiro Toddobaadka Maraakiibta ee Rolli (Oktoobar 4-8) iyadoo lala kaashanayo Toddobaadka Maraakiibta ee Genoa, dhacdadii labadii sannadoodba mar la isugu keeno dekadaha, badaha, iyo hawl -wadeennada saadka adduunka oo dhan. Qasriyadu waxay martigeliyaan shirarka iyo dhacdooyinka dhaqanka, marka laga reebo bulshada badda - dhaxal u leh taariikh qadiimi ah, tii Jamhuuriyadda Badaha oo u furan dadweynaha.
xushmad Laura Guida
Maalmaha dhabta ah ee Rolli (Oktoobar 9-10) waxay ku habboon tahay in la ogaado magaalada xawaareheeda gaarka ah, oo ay hagaan sheekooyinka xirfadleyda iyo xiriiriyeyaasha sayniska ee u sheegay sheekooyinka, sheekooyinka, iyo yaababka “Superba,” boqoradda Mediterranean-ka. Laba maalmood oo madadaalo ah oo aan joogsi lahayn iyo booqashooyin lagu majeerto taallooyinka ugu xiisaha badan magaalada-qasriyada Rolli iyo sidoo kale filooyinka, jardiinooyinka, matxafyada, iyo kaydadka, waxaa ku jira dhismayaal badan oo si gaar ah u furan dadweynaha munaasabadan.
Tusaale ahaan, dhismayaasha quruxda badan ee Strada Nuova - Palazzo Doria Tursi, oo leh labadiin jardiino - waxay soo bandhigaan violins -ka Paganini, aruurinta farshaxanka Flemish -ka, iyo farshaxanimo sida Penitent Magdalene oo uu qoray Antonio Canova. Palazzo Bianco wuxuu bixiyaa aruurinta farshaxannada Talyaaniga, Flemish, iyo Isbaanishka, halka Palazzo Rosso ay la yaabtay alaabteeda asalka ah iyo sawir sawir leh oo ay ku sawiran yihiin Veronese, Guercino, Dürer, iyo Van Dyck.
Isla waddada, Palazzo Nicolosio Lomellino waa unicum qaab dhismeed, oo leh qolal stucco ah oo lagu sharraxay frescoes qarnigii 17aad iyo beer qarsoodi ah oo qurux badan oo leh farshaxanno qadiimi ah. Booqashada Palazzo Stefano Balbi, fadhiga Madxafka Qasriga Boqortooyada, waa fursad lagu ogaanayo noloshii Genoese iyo taliskii Talyaaniga qarnigii 17aad, iyadoo la bogaadinayo Hoolka Muraayadaha, Qolka Carshiga, iyo Qolka Kubadda.
Dabaqa sare ee Qasriga Spinola di Pellicceria, oo ku yaal Galbeedka Qaranka ee Liguria, mid ayaa fool ka fool ula kulmaya “Ecce Homo” oo ah farshaxankii Antonello da Messina. Palazzo della Meridiana waxaa lagu kala saaraa qaabka xorriyadda naqshadda - Coppedè, iyo Palazzo Centurione Pitto waxay la tartamaysaa dhismayaasha Via Garibaldi wareegyadeeda fresco.
Bannaanka xarunta taariikhiga ah waxaa ku yaal Villa del Principe, oo ah hoygii Renaissance ee Charles V, kaas oo Admiral Andrea Doria ku hareereysan yahay beer qurux badan oo Talyaani ah oo badda agteeda ah.
Waxaa ka mid ah tuulooyinka qurxoon ee xaafadaha u furan munaasabadda, waxaa sidoo kale jira qarnigii 16aad Villa Imperiale, oo ku yaal maktabadda Lercari, oo leh baarkin xiise leh oo lagu habeeyay dhowr meelood oo joometeri ah - Villa Duchessa di Galliera, oo xukuma buuraha ka sarreeya magaalada Voltri waxayna leedahay baarkin qarnigii 18aad oo leh beerta qaabka Talyaaniga; meel quduus ah iyo tiyaatarka arooska taariikhdu markay ahayd 1785; iyo Villa Spinola di San Pietro, oo ah qarnigii 17aad domus patrician domus oo ku yaal rubuc qarnigii Genoese Sampierdarena.
Rolli Days Live & Digital waa dhacdo dhiirrigelisay oo abaabushay Dawladda Hoose ee Genoa oo kaashanaysa Rugta Ganacsiga ee Genoa, Wasaaradda Dhaqanka - Xoghaynta Gobolka ee Liguria, Ururka Rolli ee Jamhuuriyadda Genoa, iyo Jaamacadda Genoa.
Mario Masciullo - eTN Talyaaniga
Mario waa ruug -caddaa ka shaqeeya warshadaha safarka.
Waayo -aragnimadiisu waxay ku baahsan tahay adduunka oo dhan tan iyo 1960 -kii markii uu ahaa 21 jir wuxuu bilaabay sahaminta Japan, Hong Kong, iyo Thailand.
Mario wuxuu arkay Dalxiiska Adduunka oo casriyeysan oo markhaati ka ah
burburinta xididka/maraggii hore ee dalal tiro badan oo doorbiday casriyeynta/horumarka.
Intii lagu jiray 20 -kii sano ee la soo dhaafay waayo -aragnimada safarka Mario waxay ku urursanayd Koonfurta Bari Aasiya oo goor dambe ku daray Qaaradda Hindiya.
Qayb ka mid ah waayo -aragnimada shaqo ee Mario waxaa ka mid ah hawlo badan oo ku jira Duulista Rayidka
beerta ayaa la soo gabagabeeyey ka dib markii la abaabulay kik oo loogu talagalay Malaysia Singapore Airlines ee Talyaaniga oo ah Macallin oo sii waday 16 sano doorka Maareeyaha Iibka /Suuqgeynta Talyaaniga ee Singapore Airlines kadib kala qaybsanaantii labada dowladood Oktoobar 1972.
Ruqsadda Weriyenimo ee rasmiga ah ee Mario waxaa leh “Amarka Qaranka ee Saxafiyiinta Rome, Italy 1977.
Dhacdada Mataanaha Cusub ee Skal ee Rome, Budapest, iyo Madrid Maanta
Qoob-ka-ciyaarka dambe looma oggola meelaha lagu caweeyo ee Berlin